समाचार - कसरी प्रेशर पानी गन छनौट गर्न
कार स्वामित्व मा वृद्धि संग, कार धुने को मूल्य पनि बढेको छ। धेरै युवा कार मालिकहरूले सस्तो, छिटो, सुविधाजनक र वातावरण मैत्री घरेलू कार धुने छनौट गर्न आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गरेका छन्। घरमा कार धुँदा, यो पनि एक कार धुने पानी गन हुनु आवश्यक छ। कार धुने पानी बन्दुक खरीद गर्दा, ब्रान्ड विचार धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसोभए घरको कार धुने पानी बन्दुकको कुन ब्रान्ड राम्रो छ? केही कार मालिकहरूले घरको कार धुने उच्च चापको पानीको बन्दुक किन्छन्, र केही कार मालिकहरूले पोर्टेबल कार वाशर खरीद गर्छन्। आउनुहोस् हामी कसरी घरको धुलाईको लागि एक उच्च प्रेशर पानी बन्दूक किन्ने एक नजर हेरौं।
जब व्यक्तिले विभिन्न शपिंग वेबसाईटहरूमा खोजी गर्दछन् र पत्ता लगाउँदछन् कि त्यहाँ धेरै ब्रान्डको हाई प्रेशरको पानी बन्दुकहरू छन् घरको कार धुनेको लागि, र मूल्य भिन्नता पनि धेरै ठूलो छ। केहीको लागत २० देखि yuan० युआन मात्र हुन्छ, जबकि अरूको लागत दुईदेखि तीन सय युआनसम्म जान्छ। "कार धुनेको लागि कुन ब्रान्डको उच्च चाप पानी गन राम्रो छ" जस्ता प्रश्नहरूको उत्तरमा, हामीले तपाईंको लागि केही सूचना स collected्कलन गरेका छौं।
घरको कार धुने उच्च चाप पानी बन्दूक एक उच्च अंत व्यावहारिक सफाई उपकरण हो जुन विशेष रूपमा पारिवारिक कारहरूको लागि बनाईएको हो, जसमा पानी बचत, दबाव र पर्यावरण संरक्षणको फाइदाहरू छन्। हाल, अनलाइन बिक्रि गरिएको कार धुनेका लागि धेरै ब्रान्डको उच्च प्रेशर पानी बन्दुकहरू छन्, भरपर्दो गुणस्तरका ब्रान्डहरूमा मुख्य रूपले ह्युबर, टाइगर नाइट, गेब्रियल, र ओरिची समावेश छन्।
घरको कार धुने लागि उच्च चाप पानी बन्दुक को फाइदाहरु
1. प्रयोग गर्न सजिलो
सजिलो प्रयोग घरको कार धुने लागि उच्च दबाव पानी बन्दूक को सबै भन्दा ठूलो लाभ हो। यदि घरेलू कार धुनेको लागि उच्च दबावको पानी बन्दुक छैन भने, हाम्रो कार धुने धेरै समस्याग्रस्त हुनेछ। कार धुने लागि उच्च दबाव पानी बन्दूक बिना, हामी मात्र कार धोउँदा मात्र बाल्टिनको साथ कार धुन सक्छौं। यो धेरै थकित हुनुपर्दछ। यदि हामीसँग पानीको बन्दूक छ भने हामी यो समस्याबाट बच्न सक्दछौं, जसले गर्दा कार सफा गर्दा हामी ऊर्जा बचत गर्न सक्दछौं, र हामी बाल्टिनको वरिपरि भाग्नुपर्दैन। पानीको बन्दुकले गाडी धुने पनि सफा छ, र कार सफा गर्न सजिलो छ। एउटा बाल्टिनमा कार धुँदा, पानी सुख्खा हुन सजिलो हुँदैन, र गाडीका भागहरू सजिलै पानीले कुँदिए।
२. पानी संरक्षण गर्नुहोस्
कार धुँदा, पानी सबैभन्दा बढी प्रयोग हुन्छ। जब हामी बाल्टिनले कार धुन्छौं, कार बाढी झैं धुइन्छ। त्यसैले हाम्रो लागि पानी बचत धेरै महत्त्वपूर्ण छ। धेरै कार मित्र भन्छन् कि उनीहरूलाई पानीको वास्ता छैन। तपाईलाई मतलब छैन तर तपाईको कारले ख्याल राख्छ। यदि शरीरमा धेरै पानी छ भने, यो सजिलैसँग कारको केही संवेदनशील भागहरूमा प्रवेश गर्न सक्दछ। जब हामी सुरू गर्दछौं, यो धेरै खराबी हुने सम्भावना हुन्छ। कार हेडलाइटहरू एक राम्रो उदाहरण हो। धेरै केसहरूमा, कार हेडलाइट्सको क्षति पानीको बत्ती लैजाने बर्षाको कारण हुन्छ।
कसरी एक घरेलू उच्च दबाव पानी बन्दूक छनौट गर्न?
यस चरणमा, उच्च दबावको पानी बन्दुक किन्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सामग्री, कारीगरी र विवरण हो, ब्रान्ड होइन। अर्को, हामी तपाईंसँग घरेलु कार धुने लागि उच्च दबाव पानी बन्दुक खरीद मा केही अनुभव र कौशल साझा गर्नेछौं।
१. उच्च दबाव पानी बन्दुकको नोजलमा हेर्नुहोस्।
कार धुने उच्च-प्रेशर पानी बन्दुकको नोजल यति सरल छैन, वास्तवमा धेरै ज्ञान। एक उच्च दबाव पानी बन्दुक को सबै भन्दा कमजोर घटक नोजल हो। यो तामाको बनेको नोजल रोज्न उत्तम हुन्छ।
२. उच्च दबाव पानी बन्दुकको नलीमा हेर्नुहोस्।
उच्च-दबाव पानी बन्दुकको नली दबाब, चिसो, उच्च तापमान, क्षरण र बुढेसकाल प्रतिरोधात्मक हुनुपर्दछ। सुझाव: ईन्फेरियर उच्च-दबाव नली नरम छन्। उच्च-दबाबको पानीले भरिए पछि, तिनीहरू सजिलैसँग फुट्नेछ जब तिनीहरू पा by्ग्राहरू द्वारा कुल्चिए पछि तिनीहरू लामो समय सम्म प्रयोग गरिए पछि सजिलै उमेर बढ्नेछ। ईवा वा पीवीसीले बनेको कार धुने नली छनौट गर्नु उत्तम हुन्छ।
L. उच्च प्रेशरको पानी गनको पानी प्रेशरमा हेर्नुहोस्।
यो सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ कि उच्च-प्रेशरको पानी बन्दुकले सफा गर्दा, सफा सफा छ कि छैन धेरै हदसम्म त्यसमाथि निर्भर गर्दछ जुन स्प्रे गरिएको पानीको चाप कडा हो कि होइन। यदि छिटो पानीको दबाब सानो छ भने यसले गम्भीरताका साथ सफाई गतिमा असर पार्नेछ र राम्रो गुणको उच्च चाप पानी गनले अक्सर कडा पानीको चाप उत्पन्न गर्न सक्दछ, ताकि कारको दाग चाँडै र पूर्णतया हटाउने उद्देश्य प्राप्त गर्न।
L. उच्च दबाव पानी बन्दूकको इन्टरफेस सामग्री हेर्नुहोस्।
पानी बन्दूक ईन्टरफेस सामग्रीको गुणस्तरले उच्च चाप पानी गनको सेवा जीवनलाई असर गर्दछ। उच्च गुणस्तरको प्रेशर वाटर गनले सामान्यतया सबै तामा सामग्रीहरू पानी बन्दूकको टाउकोको सामग्री र पानी पाइप इन्टरफेसको रूपमा प्रयोग गर्दछ, जबकि सस्तो कार वॉश उच्च-दबाव वाटर गन इन्टरफेस प्राय: प्लास्टिकको हुन्छ। पानी चुहावट र कमजोर स्थायित्वको खतरा।
C. उच्च दाब पानी बन्दुकको प्रशंसा दर र बिक्री मात्रा।
यदि कसैले उच्च-दबाबको पानी बन्दुक वा कार वाशरहरू अनलाइन खरीद गर्ने योजना बनाइरहेको छ भने, उसले उच्च दबावको पानी बन्दुकको बिक्री र अनुकूल रेटिंगमा हेर्न सक्दछ। घरको कार धुने लागि एक उच्च-दबाव पानी बन्दुक को बिक्री र प्रशंसा दर एक हदसम्म प्रतिनिधित्व गर्दछ जब यो कार धुने को कार मालिकहरु द्वारा मान्यता छ।